10+ को सबैभन्दा लोकप्रिय Premium Wordpress प्लगइन 2017 फ्री डाउनलोड लागि
mujeer January 28, 2017 30 टिप्पणीहरू
1,Essential Grid Plugin This Plugin related your website shop. तपाईं वेबसाइट लागि दोकान चाहनुहुन्छ भने,नयाँ वेबसाइट बनाउन र यस प्लगइन डाउनलोड. तहहरू WP, WPML, WooCommerce 2.6.x, WooCommerce 2.5, WooCommerce 2.4.x, WooCommerce 2.3.x, WooCommerce 2.2.x, WooCommerce 2.1.x, दृश्य संगीतकार 4.12.x, दृश्य संगीतकार 4.11.x, दृश्य संगीतकार 4.10.x, दृश्य संगीतकार 4.9.x, दृश्य संगीतकार 4.8.x, दृश्य संगीतकार 4.7.x, जगको, बूटस्ट्रैप 3.x, बूटस्ट्रैप 2.3.x, बूटस्ट्रैप 2.2.2, बूटस्ट्रैप 2.2.1, बूटस्ट्रैप 2.1.1, थप पढ्नुहोस् [...]
mujeer January 26, 20175टिप्पणीहरू
1.क्यामिली - व्यक्तिगत & Magazine WordPress Responsive Clean Blog Theme This theme is very high and New theme in the market now i wish all people's first try. First you download theme and put your WordPress add theme put the zip file and now go to theme customize Now this theme is also very cool its related your shop. First you download for free and customize the theme..... Customize means put your logo design header banner and also others from your requirements..<1> Demo Live थप पढ्नुहोस् [...]
How to keep our town Hazrat Muhammad (S.A.W) Said that "Cleanness is half Truth" सबै भन्दा पहिले, we should follow this Hadees of (P.B.U.H) It's mean that we are to clean our each an everything which is belonged to our living style, For Example, We should clean our clothes, body, teeth and this place where we are living when we see any society ever. In which style they are living, if we see that they are living Uncleanness suppose, is their home in their body, clothes are dirty, So we should try थप पढ्नुहोस् [...]
Homologous श्रृंखला र homologous श्रृंखला को विशेषताहरु
mujeer January 22, 2017 24 टिप्पणीहरू
Homologous series and characteristics of homologous series Definition; एक नै कार्यात्मक समूह छ, जो जैविक यौगिकों को श्रृंखला, यस्तै संरचनात्मक सुविधा तर CH2 को एक पूर्णांक नम्बर द्वारा प्रत्येक अन्य फरक (Methylene समूह) भनिन्छ "Homologous श्रृंखला". homologous श्रृंखला को संख्या आणविक ठूलो द्वारा अलग 14. Homologous श्रृंखला को विशेषताहरु: homologous श्रृंखला को सबै संख्या समान संरचना छ. Physical properties of homologous series change थप पढ्नुहोस् [...]
कसरी एक ब्लुटुथ मोबाइल जडान गर्न तपाईंको ल्याप्टप जोड्न
mujeer January 22, 20170टिप्पणीहरू
तपाईं एक ब्लुटुथ मोबाइल तपाईं ल्यापटप उपकरण साझेदारी जडान चाहनुहुन्छ. ब्लुटुथ छ जस्तै कि मा वाइफाइ जस्तै बिट तिनीहरूलाई पनि एक केबल संलग्न तपाईं प्रकृति रही बिना अरूलाई उपकरणहरू जडान अनुमति. पहिले तपाईं ल्यापटप र पनि मोबाइल छ. यो तस्वीर हेर्नुहोस्. आफ्नो पीसी एक ब्लुटुथ उपकरण जडान गर्न तपाईँले पहिला यो जोडी र आकर्षण सेट जान आवश्यक. तपाईंको ल्यापटप स्वचालित एक ब्लुटुथ उपकरण खोजी. ब्लुटुथ उपकरणहरू छोटो पर्खाइ पछि देखिनेछन्. Now this tab show in your laptop थप पढ्नुहोस् [...]
कसरी कम्प्युटर र ल्यापटप उच्च सर्वश्रेष्ठ सुझाव इन्टरनेट जडान गर्न
mujeer January 21, 20170टिप्पणीहरू
कसरी कम्प्युटर र ल्यापटप मा इन्टरनेट जडान गर्न. पहिले तपाईं कम्प्युटर छ र तपाईं वाइफाइ इन्टरनेट देखाउने र वाइफाइ इन्टरनेट जडान गर्न चाहनुहुन्छ. यसको सम्भव पहिलो कम्प्युटर प्रयोग वाइफाइ इन्टरनेट एउटा USB आफ्नो कम्प्युटर मा राख्न त आफ्नो कम्प्युटर वाईफाई इन्टरनेट देखाउन. म पूर्ण तपाईं कसरी इन्टरनेट कम्प्युटर र ल्यापटप मा जडान गर्न सिकाउन. अब तपाईं आफ्नो ल्यापटप प्रयोग वाईफाई इन्टरनेट चाहनुहुन्छ. ल्यापटप पहिले नै सिस्टम मा युएसबी putted छन्. समय तर्फ पहिलो क्लिक डेस्कटप प्रतिमा. You click to connect and put थप पढ्नुहोस् [...]